I-China I-concrete yokwandisa i-concrete, umthengisi othe ngqo we-factory, umphumo omkhulu Uveliso kunye neFactory | Fluffier
Inkxaso yobugcisa kwi-Intanethi, AKUKHO
isisombululo esipheleleyo seeprojekthi, Abanye
izongezo zokwandiswa kwekhonkrithi
I-agent ye-PN-4 yokwandiswa kwekhonkrithi yi-arhente yokwandisa u-U, enokutshintsha isakhiwo sangaphakathi sekhonkrithi, ukuphucula ukunyanzeliswa kokuqhekeka kunye nokunyanzeliswa kwekhonkrithi, ukuze kuncitshiswe i-shirnkage ngexesha lokuqina kwekhonkrithi. Ikhonkrithi yembuyekezo ye-shirnkage ingasetyenziselwa kumaxesha ahlukeneyo okwakha kunye nokusebenza kakuhle komsebenzi, ukukhula okuzinzileyo kwamandla exesha elide, kodwa ngaphandle kokuhlwa kwimivalo yentsimbi, enokuthintela ukusabela kwe-alkali aggregate ukuze kuphuculwe ukuqina kwekhonkrithi.
Isixa se-admixture ye-RN-4 ngokuqhelekileyo i-8-10% esekelwe kumxube wangaphakathi (ukutshintshwa kwe-cementitious material ratio). Ifanelekile kwiisamente ezahlukeneyo ze-portland kwaye ingasetyenziselwa ngokudibanisa nezinye izixube, kodwa kufuneka inqunywe emva kokuqulunqwa. Ixesha lomxube we-RN-4 ikhonkrithi kufuneka landiswe ngamasekhondi angama-30-60, kunye nephutha ledosi lingaphantsi kwe-0.5%. Emva kweeyure ze-12-24 zokuqina kwe-RN-4 ikhonkrithi, ukunkcenkceshela kunye nokunyanga kuya kwenziwa ngaphandle kweentsuku ezili-14. Akuvumelekile ukuba isetyenziswe kwindawo yokusebenza kunye neqondo lokushisa elingaphezu kwama-80 degrees. Ukuba ubushushu bokwakha bungaphantsi kwe-5 degree, amanyathelo okufakelwa kufuneka athathwe.
Umsebenzi ongundoqo wobuGcisa: Ngaphantsi kwedosi ethile, amandla abanzi kunye namandla e-flexural yi-10-30% ephezulu kunekhonkrithi yereferensi kwiintsuku ze-3, iintsuku ezi-7 kunye neentsuku ze-28, kwaye amandla asemva kwexesha aqhubekayo ukunyuka. Emva kokubandakanya i-RN-4 i-ejenti yokwandiswa kwe-composite, isalathisi sokungabonakali sekhonkrithi ngamaxesha angama-1-2 ekhonkrithi yereferensi. Emva kokuba i-index impermeability index S ngaphezu kwe-30 ifakwe kwi-RN-4 i-ejenti yokwandisa i-composite, ikhonkrithi iya kuba nomsebenzi omhle wokusebenza kunye nelahleko encinci ye-slump.
Ngaphambili: I-Accelerator yoMgangatho omkhulu weConcrete, isiphumo esilungileyo
Okulandelayo: I-concrete yokwandisa i-additive, ibakala eliphezulu, isampuli ekhoyo, ikhemikhali eluhlaza
Ulwandiso lwekhonkrithi, ibakala eliphezulu, isampulu ...